သိပ်​ချစ်​တတ်​တဲ့မိန်းမ နဲ့ သိပ်​ရက်​စက်​တဲ့မိန်းမဆိုတာ... - Askstyle
သိပ်​ချစ်​တတ်​တဲ့မိန်းမ နဲ့ သိပ်​ရက်​စက်​တဲ့မိန်းမဆိုတာ…
သူမ ချစ်​သူကို ချစ်​​နေတာပဲ သိတယ်​ … ဖုန်းမဆက်​ရင်​ သူဆက်​မယ်​ … အပြင်​​တွေ သွား​နေရင်​ စိတ်​ပူမယ်​ … တစ်​ခါတစ်​​လေ သူမ နဲနဲ စိတ်​​ကောက်​လို့ သူပြန်​စိတ်​ဆိုးရင်​ သူမက ပြန်​​ချော့မယ်​ .. မျက်​နှာပျက်​​နေလား သူကြည့်​မယ်​ စိတ်​ညစ်​​နေလား သူသိတယ်​… ထွက်​မသွားပါနဲ့ ဖက်​တွယ်​ထားမယ်…သူမ အိမ်​မက်​က ရိုးရိုး​လေးပဲ သူ့ချစ်​သူကို လက်​ထပ်​မယ်​ သာယာတဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေး​လေး ထူ​ထောင်​မယ်​ … သူ​ပေးနိုင်​တာအပြင်​ သူမဘာမှ ထပ်​ပြီး​ တောင်းဆိုတာမျိုး မရှိခဲ့ဘူး … သူမဟာ သူ့အတွက်​ သူ့ကို အရမ်းချစ်​တယ်​ ဆိုတဲ့ အသိကို ​ပေးရုံအပြင်​ မပိုခဲ့ဘူး.. တစ်​​နေ့ သူ့ကို ပစ်​ပြီး အခြား တစ်​​ယောက်​ဆီ ထွက်​သွားတဲ့ အခါ လွမ်းတယ်​ ဆိုတာအပြင်​ သူမ ဘာမှ မ​နှောက်​ယှက်​ခဲ့ဘူး… သူ ​မျှော်​လင့်​တာ တစ်​​နေ့ ပြန်​လာမလားပဲ…
ချစ်​တယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ အပြည့်​မယုံဘူး … နင်​က ဒီလိုလား ငါလည်း ဒီလိုပဲ လမ်းခွဲမလား တာ့တာပဲ… နင့်​မျက်​နှာ စိတ်​ညစ်​​နေသလား ဆိုတာထက်​ ငါစိတ်​​ကောက်​​နေတာကို နင်​အရင်​​ချော့ ဒါပဲ … နင်​ပင်​ပန်း​နေလား ဆိုတာထက်​ နင့်​ထက်​ငါ ပိုပင်ပန်းတယ် ​ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးနဲ့ ပြန်​နှိပ်​စက်​တတ်​တယ်​ … နင်​ မဆက်​သွယ်​ပဲ ​နေနိုင်​လား ရတယ်​ ငါပစ်​ထားမှ နင်​လာမကပ်​နဲ့ … ပျင်းလာပြီဆို အ​သေရစ်​​ပေးလိုက်​မယ်​ ပြသနာ​တွေ ရှာ​ပေးလိုက်​မယ်​ ငါ့ဒဏ်​ကို ခံနိုင်​မှ ငါ့ဘ၀ထဲဝင်​ခဲ့ … ငါ့ကို ​ပျော်​​အောင်​ ထားနိုင်​လား မထားနိုင်​ရင်​ ထားနိုင်​တဲ့ ရင်​ခွင်​အသစ်​ကို ​ပြောင်းဖို့ ၀န်​မ​လေးဘူး…
​ယောက်ျား​လေး တစ်​​ယောက် ​ဘ၀မှာ သိပ်​ချစ်​တတ်​တဲ့ မိန်းမကို ကြုံဖူးတဲ့သူ ရှိသလို သိပ်​ရက်​စက်​တဲ့ မိန်းမကို ကြုံဖူးတဲ့သူ ရှိတယ်​ … ဒါ​ပေမယ့်​ လူ​တွေက ကိုယ့်​ကိုယ်​​ပျော်​​အောင်​ လုပ်​​ပေးတဲ့သူထက်​ မျက်​ရည်​ကျ​စေတဲ့သူကို စွဲလန်းတတ်​တာ သဘာဝကို ဖြစ်​​နေတယ်​ … ကြာလာ​တော့ သိပ်​ချစ်​တတ်​တဲ့ မိန်းမတစ်​​ယောက်​ဟာ သိပ်​ရက်​စက်​တတ်​တဲ့ မိန်းမ တစ်​​ယောက်​အဖြစ်​ ​ပြောင်းလဲလာတယ်​ … သူတစ်​ကယ် ​ချစ်​တဲ့သူနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ချစ်​တတ်​တဲ့ မိန်းမအဖြစ်​ ဟန်​​ဆောင်​ရုံ​လေးပဲ ရှိ​တော့တယ်​ …. သိပ်​ချစ်​တတ်​တတ်​တဲ့ မိန်းမတစ်​​ယောက်​ကို ​ပြောင်းလဲ မပစ်​လိုက်​ပါနဲ့ … သူတို့ သိပ်​ရက်​စက်​ တတ်​သွားတဲ့အခါ သိပ်​​ကြောက်​ဖို့ ​ကောင်းတယ်​ …
~OMG~ Credit Aung Phone
သိပျ​ခဈြ​တတျ​တဲ့မိနျးမ နဲ့ သိပျ​ရကျ​စကျ​တဲ့မိနျးမဆိုတာ…
သူမ ခဈြ​သူကို ခဈြ​​နတောပဲ သိတယျ​ … ဖုနျးမဆကျ​ရငျ​ သူဆကျ​မယျ​ … အပွငျ​​တှေ သှား​နရေငျ​ စိတျ​ပူမယျ​ … တဈ​ခါတဈ​​လေ သူမ နဲနဲ စိတျ​​ကောကျ​လို့ သူပွနျ​စိတျ​ဆိုးရငျ​ သူမက ပွနျ​​ခြော့မယျ​ .. မကျြ​နှာပကျြ​​နလေား သူကွညျ့​မယျ​ စိတျ​ညဈ​​နလေား သူသိတယျ​… ထှကျ​မသှားပါနဲ့ ဖကျ​တှယျ​ထားမယျ…သူမ အိမျ​မကျ​က ရိုးရိုး​လေးပဲ သူ့ခဈြ​သူကို လကျ​ထပျ​မယျ​ သာယာတဲ့ အိမျ​​ထောငျ​​ရေး​လေး ထူ​ထောငျ​မယျ​ … သူ​ပေးနိုငျ​တာအပွငျ​ သူမဘာမှ ထပျ​ပွီး​ တောငျးဆိုတာမြိုး မရှိခဲ့ဘူး … သူမဟာ သူ့အတှကျ​ သူ့ကို အရမျးခဈြ​တယျ​ ဆိုတဲ့ အသိကို ​ပေးရုံအပွငျ​ မပိုခဲ့ဘူး.. တဈ​​နေ့ သူ့ကို ပဈ​ပွီး အခွား တဈ​​ယောကျ​ဆီ ထှကျ​သှားတဲ့ အခါ လှမျးတယျ​ ဆိုတာအပွငျ​ သူမ ဘာမှ မ​နှောကျ​ယှကျ​ခဲ့ဘူး… သူ ​မြှျော​လငျ့​တာ တဈ​​နေ့ ပွနျ​လာမလားပဲ…
ခဈြ​တယျ​ ဒါ​ပမေယျ့​ အပွညျ့​မယုံဘူး … နငျ​က ဒီလိုလား ငါလညျး ဒီလိုပဲ လမျးခှဲမလား တာ့တာပဲ… နငျ့​မကျြ​နှာ စိတျ​ညဈ​​နသေလား ဆိုတာထကျ​ ငါစိတျ​​ကောကျ​​နတောကို နငျ​အရငျ​​ခြော့ ဒါပဲ … နငျ​ပငျ​ပနျး​နလေား ဆိုတာထကျ​ နငျ့​ထကျ​ငါ ပိုပငျပနျးတယျ ​ဆိုတဲ့ စကားလုံးမြိုးနဲ့ ပွနျ​နှိပျ​စကျ​တတျ​တယျ​ … နငျ​ မဆကျ​သှယျ​ပဲ ​နနေိုငျ​လား ရတယျ​ ငါပဈ​ထားမှ နငျ​လာမကပျ​နဲ့ … ပငျြးလာပွီဆို အ​သရေဈ​​ပေးလိုကျ​မယျ​ ပွသနာ​တှေ ရှာ​ပေးလိုကျ​မယျ​ ငါ့ဒဏျ​ကို ခံနိုငျ​မှ ငါ့ဘဝထဲဝငျ​ခဲ့ … ငါ့ကို ​ပြျော​​အောငျ​ ထားနိုငျ​လား မထားနိုငျ​ရငျ​ ထားနိုငျ​တဲ့ ရငျ​ခှငျ​အသဈ​ကို ​ပွောငျးဖို့ ၀နျ​မ​လေးဘူး…
​ယောကျြား​လေး တဈ​​ယောကျ ​ဘဝမှာ သိပျ​ခဈြ​တတျ​တဲ့ မိနျးမကို ကွုံဖူးတဲ့သူ ရှိသလို သိပျ​ရကျ​စကျ​တဲ့ မိနျးမကို ကွုံဖူးတဲ့သူ ရှိတယျ​ … ဒါ​ပမေယျ့​ လူ​တှကေ ကိုယျ့​ကိုယျ​​ပြျော​​အောငျ​ လုပျ​​ပေးတဲ့သူထကျ​ မ​ကျြ​ရညျ​ကြ​စတေဲ့သူကို စှဲလနျးတတျ​တာ သဘာဝကို ဖွဈ​​နတေယျ​ … ကွာလာ​တော့ သိပျ​ခဈြ​တတျ​တဲ့ မိနျးမတဈ​​ယောကျ​ဟာ သိပျ​ရကျ​စကျ​တတျ​တဲ့ မိနျးမ တဈ​​ယောကျ​အဖွဈ​ ​ပွောငျးလဲလာတယျ​ … သူတဈ​ကယျ ​ခဈြ​တဲ့သူနဲ့ ကွုံတဲ့အခါ ခဈြ​တတျ​တဲ့ မိနျးမအဖွဈ​ ဟနျ​​ဆောငျ​ရုံ​လေးပဲ ရှိ​တော့တယျ​ …. သိပျ​ခဈြ​တတျ​တတျ​တဲ့ မိနျးမတဈ​​ယောကျ​ကို ​ပွောငျးလဲ မပဈ​လိုကျ​ပါနဲ့ … သူတို့ သိပျ​ရကျ​စကျ​ တတျ​သှားတဲ့အခါ သိပျ​​ကွောကျ​ဖို့ ​ကောငျးတယျ​ …
ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ မိန်းကလေးတွေက သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရလို့ အသဲကွဲသွားရင် ငိုတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိကြတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရရင် ရင်ထဲမှာ ငိုရတာထက်ပိုပါတယ် 💖 💘 …
ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ မိန်းကလေးတွေက သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရလို့ အသဲကွဲသွားရင် ငိုတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိကြတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရရင် ရင်ထဲမှာ ငိုရတာထက်ပိုပါတယ် 💖 💘 ... ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့…
ချစ်လို့ ဖြစ်ဖြစ် မုန်းလို့ဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်လို့ အပ်နှံခဲ့တဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်တော့မှ အနိုင်မယူမိပါစေနဲ့ ခုချိန်မှာ သူမဟာ သင့်ရဲ့အိပ်ရာထက်ဝယ်။နောက်ဆုံးတော့ သူမကို သင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီပေါ့။သင် သူမရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ကူညီပြီး…
တာဝါတိုင် နှင့် လူတို့ကျန်းမာရေး…
အင်မတန်ကူးစက်လွယ်တယ်ဆိုပဲ ကူးစက်ရင်လဲ ကုသဖို့မလွယ်ဘူး
မိန်းကလေးတိုင်း အချစ်ခံချင်ကြတဲ့ (တဏှာမပါသော) အချစ်💖 💘 …
မြန်မာပြည်မှ DJ အလန်းလေးများ…
ရေစက်ချလှူခြင်းနှင့် ရေစက်မချဘဲလှူခြင်း အကျိုးကွာခြားချက်…
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် ကုသိုလ်ကံပွင့် ဘုရားရှိခိုး ဆုတောင်း ဂါထာတော်
သံပုရာသီး အနည်းငယ်ကို လှီးပြီး အိပ်ယာဘေးနားထားအိပ်ရင်
ယောက်ျားစွမ်းဆောင်ရည်ကို အထူးမြင့်မားစေသော သဘာဝအစားအစာများ…
ရေပြတ်လပ်မှုကြုံရတော့မယ့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးမြို့တော် Cape Town…